Garee cimaa Gaarz Kiruuks kan torbee kanaa: Haazaard, Aguweeroo, Saalaah, Istarliing, Looftas-Chiik - BBC News Afaan Oromoo
Garee cimaa Gaarz Kiruuks kan torbee kanaa: Haazaard, Aguweeroo, Saalaah, Istarliing, Looftas-Chiik
Maanchistar Siitiin injifachuun dursummaasaanii adda addummaa qabxii saddeetiin yoo cimsatan, Gareen Mooriinhoo Yunaayitidis dirree isaaniirratti Biraayitaniin moo'uun qabxii sadii argataniiru.
Arsenaal Barnileey galchii peenaalitii sa'aatii dhumaarratti argamteen moo'uun sadarkaa 4 keessa yoo seenan, Cheelsiin dirree Liivarpuul Aanfiilditti imaluun qabxii qooddatanii deebii'uu danda'anii jiru.
Taphattoota garee cimaa ani filadhe keessa seenan asii gadi jiru.
Galchii eegaa - Been Foostar (Weest Biroom)
Goodayyaa suuraa Foostar kubbaa 4 galchiirraa qolee jira, kan isa caalu Siwaansiirraa, Faabiyaaniskii qofaa dha shan qoluun
Kubbaan taphataa fuulduraa Tootanhaam Soong Hiiwuung-miin irraa qole galchi eegaa cimaa akka ta'ee fi gooliin osoo itti hin lakkaa'amin turuu akka danda'u kan itti mirkaneesse dha.
Ittisaa - Seezaar Azpiilikuweeta (Cheelsii)
Goodayyaa suuraa Azpiilikuweetaan taphataa Cheelsii kamiyyuu caalaa kubbaa 8 fashalsee jira
Azpiilikuweetaan kubbaa Daani'eel Istaariij irraa fashaleesse adda taatuus, kan Mohaammad Saalaa irraa qole garuu waan ajaa'iibaa ture.
Waan Daaviid Luwiiz bara darbe hojjachaa ture hojjachuun carraa taphachuu dhorkaanii jira. Baay'ee cimaa ta'aa jira.
Ittisaa - Leewiis Daank (Biraayitan)
Goodayyaa suuraa Dank kubbaawwan 25 qaxxaamursuun taphataan Biraayitan kamiyyuu ittiin hin qixxaatu
Taphataa kana PL keessatti yoon arguun hedduu jaalachaanii dhufeen jira.
Biraayitan tapha sana injifatamanu (galchii inni ofitti lakkoofsiseen), Lukaakuun akka hin taphanne taasisuun isaa baay'ee kan dinqisiifatamu fi gareen isaas qabxii qoodatee ba'uu kan qabu ture.
Ittisaa - Viinsent Koompaanii (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Kompaaniin tapha Haadarsfiildirratti kubbaa %94 sirriitti kenne
Koompaaniin tapha Haadersifiilid ittiin injifatan irratti sochii gaarii taasisaa turuun daqiiqaa 70 irratti geeddaramuun isaa kan hin gammachiifne ture.
Kilabichi injifannoo isa barbaachisu argachuuf taphataa fuulduraa galchuuf Guwaardiyoolaan murteessuun isaa garuu kan jajjabeeffamu dha.
Ittisaa - Riyaan Beertiraand (Saawuzihaapitan)
Goodayyaa suuraa Tapha PL irratti yeroo jalqabaaf kubbaa lama galchiif mijeesseera, Beertiraand
Taphattoonni ittisaa amma jiran kubbaa galchiif ta'u mijeessanii kennuun hedduu hin beekamani. Inni garuu kana gochuu danda'eera. Kubbaan galchii jalqabaa taate kan inni Taadiichiif kenne hedduu ajaa'iba.
Kubbaan lammaffaa Chaarlii Owustiiniif kenne garuu ibsuuf kan nama rakkistudha.
Taphataa gidduu - Mohaammad Saalaah (Liivarpuul)
Goodayyaa suuraa Saalaah galchii 10 taphoota 13 irratti hirmaachuun lakkoofsisee jira, kun ammoo Istariij malee taphataan Liivarpuul kamiyyuu waan milkeessuu hin dandeenye dha.
Torbee darbe dandeettiin Saalaah kanan yaadee ol natti ta'ee jira jedheen ture. Ammas irra deebiin naaf mirkaneessee jira. Liivarpuul osoo ittsa gaarii qabaatee eessa ga'uu danda'a? Jedhee yaaduu dhiisuu hin danda'u.
Iddoo amma jiranirra fooya'aa ta'uu mala turee laata?
Taphataa gidduu - Wiil Hiiwujs (Waatfoord)
Goodayyaa suuraa Hiiwujs kubbaawwan ilaammii isaanii eeggatan 3 keessaa 2 lakkoofsisuu danda'eera.
Taphataan Weest Haam waliin yoo taphatu argeen jira. Garuu garee koo keessatti galchuuf iddoo hin arganneef ture. Galchiiwwan taphoota lama irratti giduurraa lakkoofsise garuu akkan filadhuun na amnsiisanii jiru.
Garee biyyaalessaa keessatti leenjisaa Saawuzgeetsiin filatamuu danda'aa laata kan jedhutu gaaffiidha. Haala kanaan taphachuu yoo eegale ammoo wanti hin danda'amne hin jiru.
Taphataa gidduu - Ruuben Looftas-Chiik (Kiriistaal Paalaas)
Goodayyaa suuraa Looftas Chiik tapha 9ffaa irratti Kiriistaal Paalaasiif galchii jalqabaa lakkoofsise
Ergaa Cheelsiirraa gara Kiriistaal Paalaas dhufee booda sochii bareedaa agarsiisuun ofitti amanummaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu akka danda'u, taphataa agarsiisaa jiru dha.
Taphataa gidduu - Raahiim Istaarliing (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Istarliing taphoota 18 irratti Maanchistar Siitiif galchiiwwan 12 lakkoofsisee jira
Taphataan kun haala nama ajaa'ibsiisuun Peep Guwaardiyoolaa jelatti jijjiirama guddaa agarsiisaa jira. Yeroo akkasitti galchiif dharra'u argeenii hin beeku. Taphni kaleessaa tapha lammaffaa Istarliing Siitiin akka injifatu itti taasise dha.
Taphataa fuulduraa - Eedan Haazaard (Cheelsii)
Goodayyaa suuraa Dorgommiiwwan hundarratti taphoota 13 taasiseen galchii 12 irratti kallattiin hirmaatee jira
Chaampiyoons Liigiitiin gara Baakuutti imaluu isaanii tilmaammii keessa yoo galchinu, Anfiildirratti sochii inni agarsiise baay'ee kan namatti tolu dha.
Erga shoorri haaraan akka taphataa fuulduraa lammaffaatti kennameefi booda dandeettii gaarii mullisaa jira.
Taphataa fuulduraa - Serjiyoo Aguweeroo (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Aguweeroon kilaboota 32 PL irratti faallaan taphate keessaa 31 irratti galchii lakkoofsisee jira, Booltan Wondarars irratti qofaa hin galchine
Taphataan kun gareedhaaf hojjachuu eegaluunsaa bara kanatti akka cimina addaatti kan ilaalamu dha. 1-0 durfamaa erga turanii booda peenaalitii gara galchiitti jijjiiruun kilaba isaa gargaaree jira. Dandeettii addaas irraa argaa jirra.
''Liivarpuul Cheelsii 2-1 ni injifata'': tilmaama Laawuroo, walii galtuu?